ညမင်းသား: Feb 27, 2011
Human Heart လူ့နှလုံး
17 Feb 11, 12:10
နှလုံးအကြောင်းကို အသေးစိတ်သိချင်လို့ပါ။ နှလုံးနဲ့ပက်သက်တဲ့ Vocabulary တွေရယ် နှလုံးသွေး အလုပ်လုပ်ပုံရယ်၊ နှလုံးကြွက်သား အကြောင်းတွေရော ပြည့်ပြည့်စုံစုံ အသေးစိတ်သိချင်ပါတယ်။
1. Right Coronary ညာ (ကိုရိုနရီ)
2. Left Anterior Descending ဘယ် ရှေ့-အဆင်း
3. Left Circumflex ဘယ် ပတ်လည်
4. Superior Vena Cava (ဆူပီးရီးယား-ဗီနာကေဗာ)
5. Inferior Vena Cava (အင်ဖီးရီးယား-ဗီနာကေဗာ)
LSCS and Normal labor ဗိုက်ခွဲမွေးတာ နဲ့ ရိုးရိုးမွေးတာ
Feb 22, 2011 at 5:49 PM
ကလေးမွေးရင် ရိုးရိုး မွေးတာနဲ့ ခွဲမွေးတာ ဘာတွေ ကွာခြားပါသလဲ။ ဘယ်လို အားနည်းချက် အားသာချက်တွေ ရှိပါသလဲ။ လူတော်များများက ခွဲမွေးတာ လူကြီးအတွက် မကောင်းဘူး ပြောနေကြလို့ပါ။